Laba siyaabood oo kala duwan oo loogu rakibo Google Chrome Fedora 31 | Laga soo bilaabo Linux
Laba siyaabood oo kala duwan oo loogu rakibo Google Chrome Fedora 31
Ka dib markaad si guul leh u gudatay ku rakibidda Fedora 31 kombuyuutarkaaga ama mashiinkaaga dhijitaalka ah, waxaa jira dhowr waxyaalood oo la sameeyo inaad awood u yeelato inaad nidaamiso nidaamka oo aad dareento xoogaa raaxo leh. Fedora waxaa kujira Firefox asal ahaan sida web browser, inkasta oo kiiska dad badani (Aniga ayaa kujira) doorbido inaad isticmaasho Chrome / Chromium.
Taasi waa sababta markan waxaan qormadan kula wadaageynaa kuwa aan aqoon sida loo rakibo Chrome-ka Fedora 31 oo leh laba habab oo kala duwan, oo ay ku rakibayaan biraawsarkan nidaamkooda.
1 Ku rakibidda Google Chrome / Chromium keydadka
2 Ku rakibidda Chrome xirmada RPM
Ku rakibidda Google Chrome / Chromium keydadka
Habka koowaad in aan wadaagno, waxay noo oggolaan doontaa inaan rakibno Google Chrome, Waa iyada oo awood u siinaysa kaydinta tan nidaamka.
Arrintan awgeed aynu furno xarunta softiweerka, taas oo aan ka raadin karno Chromium si aan awood ugu yeelano inaan ku rakibno nidaamka (haddii aad doorbideyso tan). Halka kuwa doorbidaya Chrome aan gujino menu-ka hamburger taas oo ku taal bidixda kore.
Halkan menu ayaa furi doona iyo waxaan dooraneynaa ikhtiyaarka "Keydadka Software". Daaqad cusub ayaa furi doonta waana fureynaa dhagsii ikhtiyaarka kaliya ee ah "badhanka si loo kiciyo keydka saddexaad".
Marka tan la dhammeeyo, fursado badan ayaa la soo bandhigi doonaa, kuwaas oo aan awood u siin karno bakhaarro kala duwan oo nidaamka ah. Iyaga iyo xulashooyinka ugu horreeya waxaan arki karnaa taas "Google" oo aan awood u siin karno adigoo gujinaya ka dibna badhanka "Firfircoon".
Hadda waxaan xirnaa daaqada oo meelaha wax lagu keydiyo waa in la cusbooneysiiyaa. (Kiiskeyga ma aysan dhicin, laakiin waa la cusbooneysiin karaa iyadoo la furo terminaal oo gudaha ayaan ku qornaa cusbooneysiinta sudo dnf).
Waxaan rakibi karnaa Chrome laga bilaabo terminal adoo garaacaya:
Kuwa jecel noocyada tijaabada:
Ama kuwa doonaya inay ku rakibaan Chromium-ka terminal-ka, waxay ku sameyn karaan iyagoo ku qoraya amarka soo socda gudaha:
Nidaamkan sidoo kale waxaa laga samayn karaa xarunta, dhexdeeda kaliya waa inaan ku qornaa amarka soo socda si aan awood ugu yeelano bakhaarrada dheeraadka ah:
Tan ayaa la sameeyay kaliya waa inaan qornaa "y" si aan u sii wadno. Intaa ka dib, aan awoodno keydka Google nidaamka, oo aan ku sameyno adigoo garaacaya:
Ugu dambeyntii si loo soo dajiyo biraawsarka waxaan kaliya qornaa:
Ama lagu rakibo nooca beta iyo nooca aan degganeyn.
Ku rakibidda Chrome xirmada RPM
Qaabka kale inaad awood u yeelatid inaad Google Chrome ku rakibto Fedora 31 soo degsanaya xirmada RPM biraawsarka si toos ah uga socda bogga rasmiga ah ee tan. PWaxaad ka sameyn kartaa xiriirka soo socda.
Halkan waxaan dooraneynaa inaan rabno inaan soo dejino xirmada RPM waanan aqbalidoonaa shuruudaha adeegsiga biraawsarka daaqada furaysa si loo soo dajiyo xirmada.
Marka soo dejintu dhammaato, waxaan aadi doonnaa galkayaga soo degsashada (waa meesha ugu habboon), haddii aad doorato meel kale waa inaad u tagtaa.
Ka mid noqoshada galka aan ku keydinayno xirmada rpm ee Google Chrome, waxaan haynaa laba wado oo aan ku rakibo. Midka hore wuxuu la socdaa maareeyaha xirmada. Taasi waa in la yiraahdo, laba jeer guji tan iyo xarunta softiweerku way furmi doontaa, taas oo aan weydiisan doonin xaqiijin si loo rakibo xirmada.
Qaabka kale ee loo rakibo baakada ayaa ka socota boosteejadaal, taas oo ay tahay inaan dhigno galka aan ku keydinayno xirmada rpm.
Xaaladda meesha ugu dambaysa, oo ah soo dejisan, waxaan ku galnaa galka kaliya innoo garaacaya:
Y Waxaan ku rakibi karnaa xirmada rpm adoo fulinaya amarka soo socda:
Waana intaas, waxaad ku bilaabi kartaa adeegsiga biraawsarkan rakibidaada cusub ee Fedora 31.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Laba siyaabood oo kala duwan oo loogu rakibo Google Chrome Fedora 31
Kooxda Khronos waxay u sameysaa hage Vulkan
OpenTitan, mashruuca isha furan ee Google si loo abuuro jajabyo aamin ah